Virginity (1) အပျို တကယ်စစ်ပါတယ် - Myanmar in Singapore
Virginity (1) အပျို တကယ်စစ်ပါတယ်
Posted by Ye latt on May 17, 2012 at 5:05am
ko phyoe အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဒီပို့ စ်လေးကနည်းနည်းရိုင်းတယ်ထင်ရင်လည်း ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်က အားလုံးဗဟုသုတရစေရန်ရည်ရွယ်ပီး ရှာတင်ထားတာပါ။ ဆရာရေးတဲ့ (လူပျိုဖြစ်ပြီ) မှာ ရေးထားတဲ့ နို့သီးဝိုင်းဟာ ပန်းရောင်၊ အညိုရောင် မတူကြဘူး။ အပျိုစစ် နေသ၍ (ကိုယ်ဝန် မဆောင်ဘူး သေးချိန်အထိ) ထိပ်ဖျားမှာ ပန်းရောင်လေး ရှိနေရမယ်။ အဲဒါ မိန်းကလေး အကုန်လုံးကို ပြောတာပါလား။ ထိပ်ဖျားမှာ ပန်းရောင်မရှိတဲ့ မိန်းမတိုင်းဟာ အပျို မစစ်တာလား ဆရာ။ အညိုဖြစ်နေရင် အပျိုမဟုတ်တော့ဘူးလား။ အဲဒါလေး သေချာအောင် သိချင်လို့ပါ။ ရင်သား အရောင်ကို ပြောရင် နှစ်နေရာမှာ ပြောဘို့ လိုတယ်။ Areola နို့အရောင်ရင့်အဝိုင်း နဲ့ Nipple နို့ထိပ်ဖျား။ နှစ်ခုလုံးက Virginity အပျိုရည်နဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲ။ အပျိုစစ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ ခန္ခာဗေဒက “In the virgin the areola is ofadelicate rosy hue” လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာသာပြန်ရင် “အပျိုဘဝမှာ နို့အလည်ဝိုင်း (အေရီယိုလာ) ဟာ နှင်းဆီသွေး အရောင်ရှိတယ်” လို့ ပြောတာပါ။ ကိုယ်ဝန် ၂ လရှိတာနဲ့ အရောင်က ရင့်လာပြီး၊ Dark brown or even black color ညိုမဲမဲကနေ အနက်ရောင်အထိ ဖြစ်တယ်။ ကလေး နို့ဖြတ်ချိန် နောက်ပိုင်းမှာ အရောင် ပြန်လျှော့ ကျလာတယ်။ ဒီလို အရောင်အပြောင်းအလဲဟာ ပဌမဆုံး-ကိုယ်ဝန် ရှိတယ်-ရှိဘူးတယ် ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အပျိုစစ်စစ်ရော လူပျိုစစ်စစ်ပါ Virgin လို့ဘဲ ခေါ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တာ မတူကြပါ။ အများစုကတော့ “မိန်းကလေး တယောက် သူ့ဘဝမှာ ပဌမဆုံးအကြိမ် မိန်းမအင်္ဂါ (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို ကျားအင်္ဂါ (လိင်တံ) ထိုးသွင်းပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံတာ တွေ့ကြုံဘူးလိုက်တာနဲ့၊ အပျို မစစ်တော့ဘူး။” “ယောက်ျားလည်း အဲလို အတွေ့အကြုံရှိဘူးတာနဲ့ လူပျို မစစ်တော့ဘူး။” လို့ နားလည်၊ လက်ခံထားကြတယ်။ (လိင်တူ-ဆက်ဆံတာကို ဒီနေရာမှာ ချန်ထားပါရစေ။) ဘယ်လို ခေါ်ခေါ်ပါ၊ အခြေအနေ အမျိုးပေါင်း များစွာ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အပျိုစစ်စစ်၊ လိင်ဆက်ဆံဘူးပေမဲ့ အိမ်ထောင် မကျသေးသူ၊ လိင်ဆက်ဆံတာ များလှပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်မရဘူးသူ၊ ကလေး မမွေးဘူးသူ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ ပျက်-ဖျက်ဘူးပြီး၊ အိမ်ထောင်မရှိ၊ ကလေးမရှိသူ၊ ဗမာတွေက တခုလပ်၊ တလင်ကွာ၊ မုဆိုးမ ခေါ်ကြပေမဲ့ သူများဆီမှာ ယောက်ျား မရှိရင်လဲ (ဆင်ဂယ်လ်) ဘဲ၊ ယောက်ျား မယူဘဲ ကလေးရသူကို (ဆင်ဂယ်လ်-မားသား)။ ဦးစားပေးတောင် ခံရမယ်။ ရှိသေးပါတယ် အအိုပေမဲ့ ပျိုအောင် လုပ်ထားသူဆိုတာ ကလေးမွေးပြီး မ-အင်္ဂါကို ခွဲစိတ် ပြုပြင်ထားသူ၊ အပျိုမြှေး အသစ်ပြုပြင်ထားသူ၊ ဒါ့အပြင်လဲ ရှိချင် ရှိအုံးမှာ။ Virginity ပျက်ယွင်းတာကို ဆေးပညာအရ စစ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ Rape အဓမ္မပြုကျင့်လို့ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ဆီ ခေါ်လာရတယ်။ ဆေးစစ်ရာမှာ (၁) Rape အထမြောက်-မမြောက်၊ ယောက်ျား သုတ်ပိုး ပေကျန်နေတာ လိုက်ရှာပြီး၊ ဓါတ်ခွဲအတည်ြ့ပုချက် ယူပေးရတယ်။ (၂) အသက်ငယ်ရင် အသက် ပြည့်-မပြည့်ပါ စစ်ရသေးတယ်။ (၃) ထိခိုက် ဒဏ်ရာတွေ ရှိ-မရှိ ကြည့်ရတယ်။ (၄) တကယ်လို့ ခံရသူဟာ အပျိုဖြစ်ခဲ့ရင် အပျိုရည် ပျက်တဲ့ အချက်ပါ ကြည့်ရတယ်။ လိင်ဆက်ဆံဘူးတာနဲ့ ရင်သားအရောင် မပြောင်းလဲသေးပါ။ ရာသီဖြစ်စဉ်က ရင်သားကို တစုံတရာ သက်ရောက်စေတယ်။ တင်းတာ၊ နာတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အသက်ရလာရင် အဝိုင်းရော ထိပ်ဖျားပါ အရောင် ရင့်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ် ဆိုတာနဲ့ ပြောင်းလဲတာတွေ တလှေကြီးထဲမယ် ရင်သား ပြောင်းလဲတာလဲ ပါတယ်။ ရင်သား ထိပ်ဝိုင်း အရောင် ရင့်လာပြီး၊ နို့သီး-ထိပ်ဖျားက အရောင်လဲ ပြောင်းတယ်။ “အသားအရောင် ဖြူဖြူ၊ ညိုညို၊ နို့သီး-ထိပ်ဖျား အလည်လောက်မှာ ပန်းရောင် စက်ကလေး ရှိနေရင် ကိုယ်ဝန် မဆောင်ဘူးသေးသူ” လို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့၊ ပန်းရောင် မတွေ့ရရင် အပျို မဟုတ်ဘူးလို့ အရင်ထုတ် ဆေးစာအုပ်တွေက ဆိုပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် မမှန်ပါဘူးတဲ့။ ယောက်ျားတွေမှာ အသက်ကြီးလာလို့ ဟော်မုန်း အချိုးအစား ပြောင်းချိန်မှာ နို့အုံက မိန်းမတွေလို ကြီးလာရင် Gynecomastia လို့ ခေါ်တယ်။ Testosterone ဟော်မုန်း နည်းလာလို့ပါ။ “နို့” ဟာ Mammals နို့တိုက်သတ္တဝါ အထီးမှာ ပါတယ် ဆိုယုံသာ မြင်ရပြီး၊ အမမှာတော့ သိသိသာသာ၊ ထူးထူးခြားခြား၊ မရှိမဖြစ် အသုံးဝင်လှတဲ့ မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ အင်္ဂါတခု ဖြစ်ပါတယ်။ Breasts ကို Mammary Gland လို့ခေါ်တာက Milk နို့ရည် ထုတ်ပေးတဲ့ အိတ်လို့ ပြောတာပါ။ ဘယ်လောက် လေးတယ်၊ တင်းတယ်၊ ပြော့တယ်၊ ဘယ်ပုံပန်း ရှိတယ်ဆိုတာ အတော်ကြီး မတူကြပါ။ အစက ကမ္ဘာလုံးခြမ်း လိုရှိရာကနေ ကြာရင် ခေါင်လောင်းပုံ ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် သိသိသာသာ ပိုကြီးပြီး၊ ကလေး နို့တိုက်နေချိန်မှာ အကြီးဆုံး။ များသောအားဖြင့် ဘယ်ဘက်က ပိုကြီးတယ် ဆိုတာကို ဆေးပညာကရော အရပ်စကားပါ ထပ်တူကြတယ်။ နို့အင်္ဂါဟာ လုံးဝန်းတယ် ဆိုပေမဲ့ တိတိကျကျ ပြောရင် အထက်-ဘေးဘက်၊ ချိုင်းဘက်ဆီ နဲနဲ ပိုရှည်ထွက်နေတယ်။ ဆေးစာမှာ Tail of breast အမြီးလို့ ခေါ်တယ်။ Nipple နို့သီးမှာ ပြွန်ပေါက်လေးတွေ ၁၅-၂ဝ ရှိတယ်။ Nipple piercing လုပ်ရင် အဲဒါတွေ ပျက်စီးစေတယ်။ Nipple ဟာ ဆလင်ဒါပုံ၊ ကတော့ပုံနဲ့၊ ၁ဝ မီလီမီတာ မြင့်တယ်။ သူ့ကို ဆွပေးရင် သန်မာမှု Erection ဖြစ်နိုင်တယ်။ နို့သီးထိပ်ကို ဆွလို့ သန်မာမှု ဖြစ်ရတာက Erectile tissue ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ကြွက်သားနု Smooth muscle ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ကြက်သီး-မွေးညင်းထတာမျိုး၊ ရာသီဥတု အေးရင် ဖြစ်ရတာမျိုးလိုပါဘဲ။ လိင်စိတ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးကို အဲဒီ နေရာကို ရေခဲ အကပ်ခိုင်းပြီး ချစ်ခန်း-ကြိုက်ခန်း ရိုက်ရတယ်။ နို့စို့နေရင်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ်မျိုးလုံးက Oxytocin ဟော်မုန်းကြောင့်ပါ။ တချို့မှာ ဒီလို ဆွပေးတာနဲ့ဘဲ Orgasm လိင်စိတ်ပြည့်ဝခြင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ နို့သီးအခြေ အရောင်အရင့် အဝိုင်းကို Areola ခေါ်တယ်။ သူ့အပေါ်မှာ တခြားနေရာက ချွေးထွက် အိတ်တွေထက် ပိုကြီးတဲ့ အိတ်လေးတွေ ရှိပြီး၊ အဆီထုတ်ပေးတာမို့ ကလေးနို့စိုနေတုံး အကာကွယ် ပေးရာကျတယ်။ Nipple က Pink ပန်းရောင် ဒါမှမဟုတ် Brownish hue ခပ်ညိုညို အရောင် ဖြစ်တယ်။ ပန်းရောင်က ပိုလှတယ် ပြောရင် "မဟူရာ" မလေးတွေက ကလောတယ်။ "ပန်းရောင်ဘဲ ကြိုက်ရင် ဝက်မကြီးဆီ သွားပါလား" တဲ့။ (အေရီယိုလာ) က အရောင် မတူကြသလို အရွယ်အစား သာမက ပုံပန်းလဲ မတူကြပါ။ အများဆုံးက စက်ဝိုင်းလို ရှိကြပေမဲ့ Elliptical ဘဲဥပုံလည်း ရှိသေးတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ အချင်း ၁ လက္မရှိကြပြီး၊ မိန်းမတွေက ၁့၂ ကနေ ၄ လက္မအထိ ရှိကြတယ်။ ဒီအဝိုင်းက ဘာလို့ပါတာလဲကို မှန်းပြောတခုရှိတယ်။ နို့ဆာတဲ့ကလေး ရှာရတာ လွယ်အောင်တဲ့။ မဟုတ်နိုင်ပါ။ ကလေးဆိုတာ မွေးကတည်းက သူ့ပါးကလေးကို တခုခုနဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့ နို့မှတ်ပြီး၊ ခေါင်း လှည့်လာမယ်။ နို့ရှာရာမှာ မျက်စိ မလိုပါ။ ကိုယ်ဝန် မဆောင်ဘူးသူ တချို့မှာ Breast နဲ့ Areola အရောင် အတော်နီးစပ်အောင် တူနေတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ရှိပေမဲ့ ကိုယ်ဝန် မဆောင်ဘူးသူနဲ့ အပျိုဘဝမှာ အခန့်မသင့်လို့ မှားယွင်းမိတာမို့ ဖျက်ဆေးသောက်ရသူတို့ ရင်သား အရောင် မတူကြပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောကြ-ငြင်းကြတာတခု ရှိတယ်။ မိန်းကလေး တယောက်မှာ နှုတ်ခမ်း အရောင်နဲ့ နို့သီးဖျား အရောင်က တူကြသတဲ့။ “မရွှေတိကျ” က လာသေးတယ်၊ အပေါ် နုတ်ခမ်း အရောင်နဲ့သာ တူတာပါတဲ့။ မွေးကာစ ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် နို့ရည်ထွတ်တာ မ-ဟော်မုန်း သတ္ထိအရ ဖြစ်တယ်။ နို့ဆိုတာ ၂ ခုထဲလို့ သိကြပေမဲ့၊ တချို့မှာ ၂ ခုမက ရှိတတ်တယ်။ ဗိုက်ထဲ နေတုံးကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ။ မင်းသား Mark Wahlberg တို့ အဲလီဇဗက် (၁) ရဲ့မယ်တော် Anne Boleyn တို့မှာ တတိယနို့ ရှိကြတယ်။ ဂျမ်းစ်-ဘွန်း ရုပ်ရှင် “ရွှေသနတ်နဲ့လူ” ထဲက လူဆိုးဆရာကြီး Francisco Scaramanga မှာလည်း အဲလို အပိုရှိတာကို ပြသေးတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်း၊ ပြေးရင်းကနေဖြစ်တဲ့ အခြေအနေတခုကို Jogger's nipple လို့ ခေါ်တယ်။ နို့သီးအဖျား နာ၊ ခြောက်၊ အနေရခက်၊ သွေးထွက်တာမျိုး ပြောတာပါ။ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတွင်းခံ မပါဘဲ ပြေးပါတဲ့။ ရှက်တတ်ရင်တော့ တထပ်ထဲ ခပ်ချောင်ချောင်သာ ဝတ်ပါတဲ့။ မြင်ကြရင်လဲ ကျန်းမာရေးအရ ဝတ်ကြတာလို့ သိထားလိုက်ပေါ့။ ယဉ်ကျေးမှု မတူရင် တန်ဘိုးထားမှု ကွဲပြားတယ်။ အံ့သြရလောက်အောက် မတူတာတွေ ရှိတယ်။ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင် တခုမှာ အသက် ၁၈ နှစ်လဲ ပြည့်ပြီ၊ ကောလိပ် သွားရတော့မယ်၊ Virgin ဘဝနဲ့ မသွားချင်ဘူးလို့ မင်းသမီးလေးကို အပြောခိုင်းတယ်။ သူ့စရိုက်နဲ့သူ ကိုက်ပါတယ်။ သတို့သမီးကို စစ်သလား ဘယ်သူကမှ မမေးဘူး။ တထောင့်တည ပုံပြင် တခုထဲမှာ သမီးရဲ့ မင်္ဂလာဦးမှာ ဖအေ လုပ်သူက အော်တဲ့အသံကို နားစွန့်နေသတဲ့။ မအေက မနက်ကျရင် အိပ်ရာခင်း သွေးစွန်းတာ လိုက်ရှာသတဲ့။ သူများတွေ လက်ညှိုး ထိုးမနေနဲ့ ပုဂံခေတ်မှာ ပန်းဦးလွှတ်ထာ မလုပ် မနေရတဲ့။ ယောက်ျားနဲ့ ပဌမဆုံး ဆက်ဆံချိန်မှာ သွေးထွက်တာဖြစ်ရင် အပျိုစစ်တယ်။ သွေးမထွက်ရင် အပျိုမဟုတ်ဘူးလို့ မပြောဘဲ အပျိုမြှေး မရှိသူဖြစ်တယ်လို့ ပြောလာကြတယ်။ အဲဒီသွေးက အပျိုမြှေး စုတ်ပြဲသွားလို့ ထွက်တာကိုး။ တခြားကြောင့် သွေးထွက်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ Endometritis, Yeast, Infections, Cervical Dysplasia, Vaginitis, Cervical Polyps, Chlamydia, Gonorrhea & other STDs ရောဂါတခုခု ရှိနေရင်လဲ သွေးထွက်နိုင်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံလို့ မဟုတ်ဘဲ အပျိုမြှေး စုတ်ပြဲစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေလဲ ရှိတယ်။ စက်ဘီးစီး၊ မြင်းစီး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်၊ ဆေးစစ်တုံးက ကရိယာထည့်လို့။
အပျိုစစ် လက္ခဏာဆိုတာတွေကို ဆေးပညာအရ ပြောပါဆိုရင် - • ရင်သား၊ တင်းနေမယ်၊ လုံးဝန်းပြီး ဆန့်နိုင်-ကြုံ့နိုင်တယ်၊ နို့သီးထိပ်က မာတင်းတင်း၊ အောက်ခြေ အဝိုင်းက ပင်ကိုယ်အသားအရောင် လိုက်ပြီး ပန်းရောင်ကနေ ညိုမဲမဲနေမယ်၊ နိုးသီးအဖျားမှာ ပန်းရောင်အစက်ရှိမယ်၊ • မိန်းမကိုယ် အပြင်နုတ်ခမ်းသား လုံးဝန်းပြီး၊ ဆန့်နိုင်-ကြုံ့နိုင်တယ်၊ နုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက် ထိကပ်နေမယ်၊ အတွင်းနုတ်ခမ်းသား နဲ့ မ-အစိတွေကို လုံးဝ ဖုံးအုပ်နေမယ်၊ • မိန်းမကိုယ် အတွင်း-နုတ်ခမ်းသား ပန်းရောင်ရှိမယ်၊ ထိရင် သိလွန်းတယ်၊ • မ-အစိ Clitoris သေးငယ်တယ်၊ • အတွင်း-နုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို ဘေးဖယ်ကား ကြည့်တဲ့အခါ မြင်နိုင်တဲ့နေရာ Vestibule ကျဉ်းတယ်၊ • မိန်းမကိုယ် အောက်ဖျား အလယ်နေရာ Fourchette အကောင်းပကတိ ရှိနေတယ်၊ • မိန်းမကိုယ် အောက်ဖျား အလယ်နေရာရဲ့ဆုံချက် Posterior commissure အကောင်းပကတိ ရှိနေတယ်၊ • ဗဂျိုင်းနား Vagina ကျဉ်းတယ်၊ • ဗဂျိုင်းနားကို ဖုံးထားတဲ့အလွှာ အရောင်က နီတယ်၊ ထိရင် သိလွန်းတယ်၊ ဘေးနှစ်ဖက် ထိကပ်နေတယ်၊ • အပျိုမြှေး Hymen အကောင်း ပကတိ ရှိနေတယ်၊ လက်ချောင်း တချောင်းစာထက် ပိုမဆံ့ဘူး၊ နုတ်ခမ်းသားက စုတ်ပြဲသလို မဟုတ်ရဘူး၊ တိတိကျကျ ဖြစ်နေရမယ်။ ဆရာဝန်ပြောတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိဆုံး ဖြစ်ကြမှာပါ။ Dr. တင့်ဆွေ Views: 33106
Comment by Htuu Sann on October 6, 2012 at 8:09am အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတိုင်းလိုလိုအနှေးနဲ့အမြန် လိုချင်တဲ့ဆိုက်တွေကိုရှာတတ်လာပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆေးပညာ
ဒီလိုဆောင်းပါးမျိုးဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် လူအများမသိမဖြစ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုမျိုးလိုအထွေထွေဗဟုသုတအဆင့်ထက်
ကျော်လွန်ပြီး ဆေးပညာအရ လိင်အင်္ဂါဆိုင်ရာအတွင်းကျကျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တင်ပြထားတဲ့ပို့စ်ဖြစ်လို့ ဆေးပညာဆိုက် မျိုးမှာသာရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလို ယျေဘုယ သုတ ရသ နည်းပညာ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ဆိုရှယ်ဘလော့ဂ်ဆိုက်မျိုးမှာ
မတင်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကိုမသိသေးလို့ မသိလိုက်လို့လည်းအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဗဟုသုတမျိုးမသ်ိလိုက်တာမျိုး လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကာလသားရောဂါကာကွယ်ဖို့ (ကုမရသေးတဲ့) အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကာကွယ်ဖို့ မသိမဖြစ်ဗဟုသုတလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၈ နှစ်အောက်မကြည့်ရရေးတိုင်း ၁၈ နှစ်အောက် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ (အထူးသဖြင့်) မိန်းကလေးငယ်လေးတွေမဖတ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။လူ့သဘာဝကိုက မကြည့်နဲ့ပြောလေကြည့်ချင်လေပဲဆိုတာကိုပိုစ့်တင်တဲ့ညီလေးသိမှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က မောင်နဲ့နှမ သားအမိ အတူ မော်နီတာတစ်ခုမှာထိုင်ပြီး ဒီဆိုက်ထဲဝင် စာဖတ်တဲ့အခါ ဒီပိုစ့်ကိုတွေ့ ရင် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ဖို့မရဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သမီးလေးတွေ သားလေးတွေကို ငယ်သေးလို့မိဖကလုံးဝလွှတ်မပေးသေးပဲ
အင်တာနက်သုံးတာကိုမျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုရင် ဒီလိုပို့စ်မျိုးကိုဒီလို ဆိုရှယ်ဆိုက်တစ်ခုမှာလာတွေ့ တာကို မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားသမီးတွေအတွက်အတော်ကိုစိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြောတာမယုံရင်တော့ သမီးအပျိုပေါက်လေးတွေရှိတဲ့ မိဖများ ကိုဒီပို့စ်ကိုပြပြီးသူတို့သဘောဆန္ဒကိုမေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ သူတို့သားသမီးလေးတွေကို ပေးဖတ်ချင်မလား ပေးမဖတ်ချင်ဘူးလားဆိုတာကို။
ကျွန်တော်လူကြီးတစ်ယောက် ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ရတာစိတ်ထဲမှာ မျက်စေ့ရှက်သလိုခံစားမိရပါတယ်။
စာတင်တင်ပေးတဲ့ညီလေးအနေနဲ့လည်း ဒီပို့စ်ဟာရိုင်းနေတယ်ဆိုတာသိနေပါတယ်။ ဒီအောက်ကစာလေးက ညီလေးကြိုတင်အမှာရေးထားတာပါ။
"အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဒီပို့ စ်လေးကနည်းနည်းရိုင်းတယ်ထင်ရင်လည်း ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်က အားလုံးဗဟုသုတရစေရန်ရည်ရွယ်ပီး ရှာတင်ထားတာပါ။"
နောက်ပြီး ဒီပိုစ့်လေးကို ညီလေးရဲ့ (၁၈ နှစ်အောက်) ညီမလေးတွေ တူမလေးတွေကိုမပြောနဲ့ အမ အဒေါ် အပျို ကြီးများရှိရင်တောင် ညီလေးအနေနဲ့ အမရေ အဒေါ်ရေ ဟောဒီဗဟုသုတလေးကိုလူတွေရစေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဆိုက်မှာ
ရှာတင်ပေးထားတယ်။ အမတို့ကတော့ ၁၈ နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဖတ်သင့်တယ်။ဖတ်လိုက်ပါဦးလို့များပြောရဲပါသလားဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာပြန်မေးကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အခုလို ဆေးပညာ လိင်ပညာပေး ပိုစ့်တစ်ခုကိုမျှဝေတင်ပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အမ ကိုယ့်ညီမ ကိုယ့်တူမ ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်အဒေါ်ကိုဖတ်ခိုင်းရဲလား ဆိုတဲ့ပေတံ နဲ့တိုင်းပါ။အဲဒီပေတံနဲ့တိုင်းလို့ ငါ့အမ အမေ င့ါအဒေါ် ငါ့တူမတော့ ပေးဖတ်လို့မဖြစ်ဘူးလိုဆိုရင် အဲဒီပို့စ်မျိုးဟာ (၁၈ နှစ်အောက် မဖတ်ရ မကလို့ အသက် ၃၀ အောက်မဖတ်ရလို့
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အထက်မှာဥပမာပေးထားတဲ့ပေတံလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ရင်တော့ တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့် မယ်လိုထင်မြင်မိပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ မိမိဆိုက်မိမိသဘောဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါကြောင်း။ It's up to you and you can have your own way ပါခင်ဗျား :)
ကိုထူးဆန်း Comment by minhtikehtun on July 29, 2012 at 8:54pm thanksalot ................ Comment by yethu on July 14, 2012 at 4:13pm Thank you very much
Comment by Robin Paing on July 14, 2012 at 3:56am thank you so much. Comment by sithu on July 14, 2012 at 1:48am hote tal lar Comment by Mg Mg on May 19, 2012 at 2:11pm Thank you very much for getting new knowledge from this post. RSS